Kuparadzanisa iyo Ikea Lottorp kana Klockis wachi - Ikkaro
kudzidziswa >> Zvemagetsi uye zvemagetsi zvekare zvehari >> Kuparadzanisa iyo Ikea Lottorp kana Klockis wachi
Kuparadzanisa iyo Ikea Lottorp kana Klockis wachi
Inodaidzwa kuti Löttorp kana Klockis, ndinofunga vakachinja zita uye wachi yakapusa, alarm, timer uye thermometer iyo yaanotengesa kuIkea kwe € 4 kana € 5. A 4 mune imwe. Izvo zvakanaka kuve nazvo mumakicheni, makamuri, nezvimwe. Chinhu chakanaka nezvewachi iyi mashandisiro ayo, zviri nyore kwazvo kushanduka pakati pemamodhi ayo ekushandisa, iwe unofanirwa kungotenderedza wachi. Nekudaro, sezvaunotendeuka, zviyero zvakasiyana zvichaonekwa pachiratidziro. Vanasikana vangu vanopenga pavanoibata. Nechekutendeuka kwega kwega, inorira uye mwenje weumwe wakasiyana unouya :)
Ini handiwanzo kutenga zvinhu kuti ndisatanidze, ndinogara ndichitora mukana kune chimwe chinhu chinoenda kumarara kana kudzokororazve, asi panguva ino handina kukwanisa kuramba. Ndakaibata muruoko, ndakava neshungu dzekuda kuziva. Ini ndichave ndinokwanisa kushandisa iyo kuratidza naArduino? Ndeipi sensor yavanoshandisa kuyera tembiricha uye kuona shanduko muchimiro? Pane here inonakidza kubira iyo inogona kuitwa kune iyo wachi? Asi pamusoro pezvose zvakandinakidza zvakanyanya ndechekuti chii chinonzi heck iro rakasununguka ruzha ruzha iwe unonzwa kana iwe uchizunza? Nei chimwe chinhu chakasununguka mukati? Uye kwete mukutarisa, asi mune ese.
€ 5? Zvichiri sosi yakachipa yezvinhu? In Amazon anovatengesa iwo € 13 iko kupenga, muchitoro unayo $ 5
Akaputika maonero kana maitiro ekuparadzanisa wachi
Ndakamira pamberi pemba ndichifunga kuti raizove basa rakareruka. Asi zvinoita sekunge izvo zveIkea hazvidi kuti isu tione zviri mukati mechigadzirwa. Iko hakuna sikuru, kwete tebhu, kwete kutsemuka muviri wese chidimbu chimwe. Ini ndinotarisa uye ndinotarisa uye chete kumberi ndiko kunosara. Saka nekurwadziwa kwese mumoyo mangu ndinoendako, zvinonyanya kukosha kuti uzviite seizvi?
Ini ndanga ndichikusiira vhidhiyo ine iyo yakaputika maonero, asi ndine matambudziko kuigadzirisa. Kana ndikaiwana ndichaiwedzera. Ichokwadi ndechekuti yanga isina kuchena chipangamazano akanaka.
Kana iwe uchida kurikatanura zvakachena tevera matanho anotevera:
unofanirwa kusimudza kumberi ne screwdriver semuenzaniso, chete ipurasitiki inoita kunge inodzivirira.
Iwe unowana chinamirwa chinofukidza iyo furemu rese, ine screwdriver enda unotarisa, panenge paine mukaha uye iwe ukauboora, pane zvimisikidzo uye haufanire kumanikidza chero chinhu.
Mumufananidzo unotevera, tarisa zvidimbu zviviri kuruboshwe, ndiyo kiyi yekuzvibvarura zvakanaka.
Paunenge iwe waona maitiro ekukatanura iyo Ini ndinosiya zvimwe zve alarm alarm mukati. Zvese zviri nyore uye ini handioni zvinhu zvakawanda zvinobatsira ichokwadi. Asi iro diki bhokisi jena rinoita ruzha ndiro dombo mukorona.
Ndinoivhura kuti ndione kuti nei ichiita ruzha, uye tarisa. A mechiniki chinzvimbo chinzwa. Isu tatoziva maitiro ekudzora chinzvimbo chewatch kuratidza imwe modhi kana imwe. Mumufananidzo yakatwasuka, asi chaizvo izvi, wachi yealam inofamba yakatwasuka, zvekuti bhora resimbi rinogara richingobata matemu. Zvinotaridzika kwandiri sehunyanzvi nzira uye kuti isu tinogona kuteedzera kune akawanda mapurojekiti.
Nguva imwe neimwe nguva wachi painotendeuka, iyo modhi uye ruvara rwechidzitiro rinochinja. Izvi zvinongozviita kuvhenekera neRGB yakatungamirwa
Mumwezve mufananidzo kuti iwe ugone kuona chimwe chikamu chebhodhi uye kuti pane zvishoma sei kutora mukana wedunhu.
Bheepa beep kana kuti ungaite sei kuti irege kuita ruzha nekutendeuka
Pakupera kweLottorp ndatanga kutarisa zvakaitwa nevanhu. Iko hakuna ruzivo rwakawanda, kwete kutaura, maviri kana matatu mareferenzi chete, hongu kubheka kana kuchinjika kunogona kubatsira. Nekuti kana paine chinhu chinogumbura nezvewachi iyi, ndeyekuti pese paunotendeuka inorira. Fungidzira kuti kwaedza mangwanani iwe une tembiricha modhi uye iwe unoda kuona iyo nguva nekuti kana iwe ukaibatidza mwenje unovhenekera uye iyo beeeep. Izvo zvinoshungurudza uye iwe unogona kumutsa vaunogara navo. Izvi vakagadzirisa
Kana ndichingozviita kumawachi atinowanzoshandisa, ini ndinokuudza kuti zvakafamba sei.
Komputa yangu inobatidza asi hapana chinoonekwa pachiratidziri
Maitiro ekuona iyo IP muLinux
Chidiki centaur, nduru yenyika
Lego Inowedzera Kufambisa Hub
Categories Zvemagetsi uye zvemagetsi zvekare zvehari Kubatikiti kufamba
Ndapedza iyo Coursera Machine Kudzidza kosi
7 inotaura nezve "Kubvarura iyo Ikea Lottorp kana Klockis wachi"
Ndira 2, 2018 pa10: 05 pm
Ini handisi munhu anobatsira (ruoko rukuru), asi ndinofanira kutaura kuti ndasuwa posvo yako, uye kuti ndinogara ndine nguva yakanaka yekuaverenga .. Ndinovimba iwe unomhanya muna 2018 .. :)
Ndira 2, 2018 pa10: 17 pm
Ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu. Vanogara vachikoshesana, chaizvo :) Ngatione kuti 2018 inoitika sei, nebasa uye nemhuri zvinonetsa kwazvo kufambirana nehuwandu hwebhuku
Ndira 11, 2018 na11: 54 am
Chandinonyatsoda kuziva ndechekuti chakabatanidzwa (eC) chiri pasi peblack glob replate ...
Ndira 11, 2018 pa12: 55 pm
Zvakanaka, handifunge kuti ndinogona kukubatsira :-(
Kubvumbi 20, 2020 pa6: 54 pm
Inonyanya kubatsira! Ndatenda! Ini ndaida kubvarura wachi iyi uye yakanditadzisa kuiparadza
Kubvumbi 22, 2020 pa8: 25 pm
Kana iwe ukawana chero chimwe chinhu chingangobatsira, usazeze kutizivisa.
Gumiguru 16, 2021 pa9: 38 pm
Mhoroi, ndinoda kuziva kuti ndingaite sei kuti mwenje weRGB ugare uripo. Kwazisai uye ndinokutendai.